Cod bixinta doorashada madaxtinimada Maraykanka oo bilaabmatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCod bixinta doorashada madaxtinimada Maraykanka oo bilaabmatay
Cod bixinta doorashada madaxtinimada Maraykanka oo bilaabmatay
November 8, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Dad codkooda ka dhiibanaya xaafada Dixville ee gobolka New Hampshire. [Sawirka: CBS]
Washington-(Puntland Mirror) Xarumaha cod bixinta ee doorashada madaxtinimada Maraykanka ayaa furmay maanta oo Talaado ah oo bishu ku beegantahay 8-da November, 2016-ka.
Doorsahada ayaa waxaa ku tartamaya Hillary Clinton oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga.
Sagaal gobol ayaa ilaa iyo hadda ay ka bilaabmatay cod bixinta iyadoo inta kale ee dalka ay ka bilaabmi doonto gelinka dambe ee maanta.
Furitaanka cod bixinta ayaa ka dhigan in ay soo afjarantay ololihii u dhaxeeyay Hillary Clinton iyo Donald Trump oo bilooyinkii u dambeeyay socday.
Sida ay muujinayaan sadaasha Hillary ayaa 3.2 boqolkiiba ku hoggaaminaysa Trump.
Tiradaan 3.2 boqolkiiba ayaa timid maalin kadib markii FBI-da ay sheegeen in aysan ku helin Hillary wax dambi ah oo Email khalad ah oo ay si gaar ah u isticmaashay.
Haddii ay Hillary Clinton ku guulaysato waxay noqon doontaa haweenaydii kowaad ee abid Maraykanka madaxweyne ka noqota.
October 18, 2016 Obama oo Trump u sheegay in uu Joojiyo cabashada
Garoowe-(Puntland Mirror) Shacabka Puntland ayaa si balaaran u soo dhaweeyay kadib markii Janaraal Siciid Maxamed Xirsi oo loo yaqaan Siciid Dheere uu ku dhawaaqay in uu u tartamayo madaxtinimada Puntland. Dad badan ayaa soodhaweyn iyo [...]
Galkayo-(Puntland Mirror) chairwoman of Puntland’s Galkayo women association shot dead by unidentified gunmen on Wednesday evening in Galkayo town, residents said. Dhudi Yousuf Adan, a chairwoman of Galkayo women association, was shot dead by unidentified [...]
Boosaaso(Puntland Mirror) Maamulihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso ayaa waxaa dilay nin hubeysan saakay oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu. Paul Anthony Fermosa, oo u dhashay jasiiradda Malta, ayaa waxaa toogasho ku dilay [...]